Muuse Suudi: Ma siyaasi sharciga ogol baa mise hogaamiye kooxeed soo rogaal celiyay? - BBC News Somali
Xigashada Sawirka, Muuse Suudi Yalaxow
Xildhibaan katirsan aqalka Senate-ka ee Soomaaliya, ahna hogaamiye kooxeed hore - Muuse Suudi Yalaxow ayaa maalmahan noqday mid aad loo hadal hayo.
"Dadka dhulkaasi deggan waxay ku andacoonayaan in nidaam dowladeed lagu siiyay, waxaan arrintan kala kaashaneynaa wasaaradda gashandhigga, si aan u dhageysano cabashadooda, waxna looga qaban lahaa," ayuu yiri Gudoomiye Yarisow oo BBC-da la hadlay.
Dhulka xeebta xigo
In badan oo ka mid ah dhul ay laheyd dowladdii dhexe ee Soomaaliya ayaa waxaa la wareegay amaba degan dad shacab oo ay kamid yihiin siyaasiyiin ay mararka qaar adagtahay in laga saaro, waxaana muddooyinkii dambe soo baxayay go'aano dowladda Soomaaliya ay ku amreyso in dhulka dowladda la baneeyo si loogu adeego bulshada, hasayeeshee waxaa mararka qaar dhacda in uu khilaaf ka dhasho.
"Sida ku qoran dastuurka, dowladda ayaa mas'uul ka ah dhulka, waa in ay dowladda u dhaqantaa si mas'uuliyad ay ku jirto oo waa in ay eegta sida dowladihii iyada ka horeeyay ay usoo dhaqmeen. Arrinta Muuse, dowladda waxaa la rabaa inay la timaaddo aragti macquul ah oo Muuse Suudi keliya ma ahane dadka oo dhan ay aqbali karaan, taasi oo u hiilineysa sareynta sharciga". Ayuu yiri Xassan Cali oo ka faallooda arrimaha ammaanka.
"Muuse Suudi wuxuu ku andacoonayaa in dowladdii Cabdullaahi Yuusuf uu hub kaga badeshay lacag, balse xiligaasi aysan heysan dhaqaale ay siiyaan oo baddelkeediina loogu qiimeeyay dhulka uu hada degan yahay, waxaana loo baahan yahay in warqadaha uu wato Muuse Suudi Yalaxow qiimeyn lagu sameeyo, si loo waafajiyo qaanuunka dalka oo hadii uu xaq ku taagan yahay na la siiyo, hadii uusan laheyn na la yiraahdo xaq uma lihid dhulka, balse marnaba aanan loo baahnayn in la qaado tallaabo ka baxsan sharciga." Ayuu yiri Xassan Cali oo si dhaw ula socday arrintan.
Xasan ayaa intaasi raaciyay in dhulkan taliska badda Soomaaliyeed uu kala yahay - Dhul ay lahaayeen ciidankii badda Soomaaliyed, guryo uu lahaa taliyaha ciidanka badda. Waxaa kaloo jiro dhul banaan oo saaran xeebta, balse dowladihii dambe ay bixiyeen oo ay u cabireen ganacsato iyo siyaasiyiin.
TOOS Israa`iil oo qamadi ku kacaya $5m u direysa 'saaxiibkeed cusub' ee Suudaan